Mahereza Info. About. What's This?
Nifampiresaka taminny namana iray aho afakomaly, ka hitako hoe azo Hatao tsara ny miara-miasa Hanatanteraka ity teti-kasa ity. Maro tokoa ny tranon-kala malagasy miezaka hampahafantatra ny Malagasy,ary samy manao izay vitany, ka inoako fa afaka hifanampy daholo ny rehetra eto.
Ny anjaranny tantsaha mampiasa zezika simika dia 5-25%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mandarine. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia haricot. Ny isanomby dia 78. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 96 ny mponina no miasa tany. 2 ny mponina no miasa aminny fanjonoana. 2 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 280 no isanny kisoa.
Ahitana tobim-pahasalamana ao. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Misy fitrandrahana harena an-kibonny tany aminny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao aminilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia tongotra. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 3 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 3 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 1000 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 1000 Fmg.
20 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 30 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 6 volana. 15 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 35 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.